Zvipo Zvepfungwa | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: Mazano kune zvipo
Chii chekupa murume - mukomana, mukoma, murume, baba kana sekuru - musi wa Kukadzi 23? Uyu mubvunzo unotanga kunetsekana vasikana nevakadzi mushure megore Idzva zororo. Ndinoda kupa chimwe chinhu chinobatsira, chakakosha ...
Chii chandinofanira kupa kuna vamwari vangu nokuda kweIsita?
PaRumuko Rumuko rwaKristu, vanamwari vanababa vanofanirwa kushanyira vana vavo vamwari, vataure nezveMutambo mukuru uyu, uye vapinde musangano weIsita muchechi pamwe chete. Uye hazvitombodiwa, sezvazviri tsika, ...
Anodiwa: - Ndiudze, pane mumwe munhu akatora modular pikicha pamufananidzo-rus? Iko kunaka kwemifananidzo kwakanaka?
Anodiwa: - Ndiudze, pane mumwe munhu akatora modular pikicha pamufananidzo-rus? Iko kunaka kwemifananidzo kwakanaka? Imba yacho yakagadziridzwa. Isu taida pendi yekumonera mufananidzo. Modular inodikanwa. Waida chii ...
Chii chandinofanira kupa baba vangu kwemazuva makumi matanhatu ekuberekwa?
Chii chekupa baba vangu pamakore makumi matanhatu ekuberekwa kwavo? VAZUKURU !! ! Izvo zvinodikanwa kwauri, asi baba vanofara! chaanoda zvakanyanya Uye ini ndaizopa Huru, yakanaka pendi Cool Clock Ndiri munguva yakapfuura ...
MAZANO ANO, chii chokupa musikana, makore 30, nokuda kwekuzvarwa kwake.
Sarudzo dzako, chii chaungapa musikana, ane makore makumi matatu ekuberekwa, kwezuva rake rekuzvarwa. Kana achiri musikana kwauri ane makore makumi matatu uye usiri mukomana, inguva yekuzvipa kwaari !!!! makumi matatu…
Ndeapi mazano aungapa kuvakomana pa 23 February?
Chii chaunokurudzira kupa vakomana muna Kukadzi 23? Izvo zvinongoitika kuti itsika kukorokotedza varume veese mazera paDefender yeZuva reMadzibaba, kusanganisira vakomana, avo vangoda kuve vadziviriri vavo ...
chii chingaisa kuna mbuya vangu kwekuyeuka kwemakore e80?
chii chekupa ambuya pazera ravo rekuzvarwa makumi masere? Chipo chaambuya. Zvirokwazvo mbuya vako vane hobho, iyo ingangove ine chekuita nekusona. Kana ambuya vako, kunyangwe vezera ravo, vachinyatsoongorora ...
Ndekupi kwandingawana pepa rakakosha pakuumba mavara?
Ndekupi kwaunogona kutenga yakasarudzika mapepa ekugadzira zvitambi? Enda kuchitoro chekudhinda. Muhofisi kana muzvitoro zvetekinoroji yedhijitari, semuenzaniso, mu "DNS" bepa reLomond rinotengeswa chete nekuda kwekudhinda zvitambi. pane…
kana iri mucheka yakagadzirwa 100% acrylic zvakanaka here? Chii chinyorwa?
kana sikafu iri 100% acrylic, zvakanaka here? chii ichi chinyorwa? ACRYLIC /. Zvigadzirwa zvekutanga zvekugadzirwa kweiri boka refaera uye tambo ndeyeacetylene uye hydrocyanic acid, ayo anowanikwa kubva ...
Chii chingapa mai vangu nokuda kwegore reChnUMX?
Chii chekupa amai kwezuva ravo rekuzvarwa makumi mashanu? rangarira maitiro aunogona kushamisika uye kumufadza ... kumubvambura kubva kukicheni neimwe mhando yerwendo kuenda kuimba yemitambo kana rwendo kana rwendo kunyangwe rwe ...
Ndeipi chipo chepakutanga chaungapa kune shamwari yako zuva rokuzvarwa?
Ndechipi chipo chepakutanga chaungapa musikana wako wezuva rake rekuzvarwa? ipa bhuku rangu Ehe, pane zvinhu zvakawanda zvaunogona kufunga nezvazvo: bhuku rine zadza rakavanzika kuitira kuti uvanze chimwe chinhu, wako mukuru ...
Iko Swarovski matombo anoita seanzwika seizvi?
Swarovski matombo anoita kunge anonzwika seizvi? girazi rinodhura. kana pane kudaro, igirazi rekristaro. vane mhando yehunyanzvi hwekugadzira uye zita, saka girazi rinodhura kwazvo. Cheka girazi (rhinestones) asi ...
Chii Chinotarisirwa? Chii icho?
Chii chinonzi Mutoro Kuva nebasa Chii icho? Chii chinonzi basa Mutoro ibasa rekuzviisa pasi pekuva nezviito nezviito, pamwe nemhedzisiro yavo.
Chii chatingapa kuna tateguru nokuda kwekuzvarwa kwake?
Chii chekupa sekuru nezvebhavhadhe rake? fodya? Kana iwe ukasasvuta pombi, saka zvinongoenda sechiyeuchidzo. tsime, kana pikicha yemhuri mune yakanaka furemu. uye kana muvhimi kana ...
Chii chaunogona kupa shamwari dzako kune yavo yemuchato yegore - makore mashanu!
Chii chaunogona kupa shamwari dzako kune yavo yemuchato yegore - makore mashanu! Makore mashanu emuchato - wedenga muchatoMhemberero yekutanga "inokudzwa" yemhuri - makore mashanu emuchato - inonzi muchato wemuti. Mhuri ine ruzivo ...
.. Chii chaunogona kupa mukomana uye shamwari ye 25 years ??
..Chii chekupa mukomana uye shamwari kwe25 makore ??? Chii chekupa mukomana kwemakore makumi maviri nemashanu? 25. Mukomana wemabhizimusi ane makore makumi maviri neshanu anokwanisa kuunzwa nekombuta nyowani inonyatso kuuya inobatsira mubasa rake. Amai vanogona kupa ...
Chii chakavezwa sirivha kana ndarama?
Chii chinonzi radiated sirivheri kana goridhe? Rhodium yakanamirwa pamapepa inowanzo kanganiswa kunzi "kupenya". Rhodium yakanamirwa pamhepo iko kushandiswa kwetete nhete ye rhodium (0,1-25 microns gobvu) pamusoro pezvigadzirwa zvesimbi kuwedzera ngura yavo ...
Chii chokupa shamwari? Zuva rekuberekwa muvhiki, kuti iwe unogona kupa musoro nokukurumidza wakaputsika. Yakagadzirwa 17 makore.
Chii chekupa shamwari? Bhavhudhe muvhiki, chii chaunogona kupa, ndiudze iwe watotyora musoro wako. Anotendeuka makore gumi nemanomwe. Rinonakidza bhuku. teddy bear chipo mazano ini ndinogona kuratidza kuti iwe umupe dambanemazwi Kofi iyo ...
Chii chingapa musikana paCNUMX?
Chii chekupa musikana kune rake rekuzvarwa kwegumi nemasere? Kitten) Ndakapa musikana wangu mufananidzo wemifananidzo, wakarairwa pano: chinongedzo ichivharirwa nechisarudzo cheiyo purojekiti manejimendi Bhokisi rekokoreti. Pane imwe pfungwa inotonhorera, ini ndiri kuenda kuitora pachangu ...
Chii chokupa musoro wekuzvarwa kwake?
Chii chekupa mukuru wako wezuva rekuzvarwa kwake? kungo tarisa zvakanyanya pazuva rino uye keke nemakenduru)))))))))))))))) Nguruve bhangi !!!! = -) isu takapa director wedu mufananidzo nechiso chake chakanyorwa ipapo nemufananidzo ...
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 0,541 masekondi.